စီးပွားရေးလူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းအင်္ဂါရပ်များ | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မတ်လ 10, 2021 တနင်္လာနေ့မတ်လ 15, 2021 Douglas Karr
အကယ်၍ သင်သည်အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါကသင်အမြဲလိုအပ်သည့်စီးပွားရေးဆော့ဖ်ဝဲ၏အရေးကြီးသောအချက် ၆ ချက်ရှိသည်။
အကောင့်အဆင့်ဆင့် - မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပလက်ဖောင်းတွင်မဆိုအလိုအလျောက်တောင်းဆိုသောအင်္ဂါရပ်သည်ဖြေရှင်းချက်အတွင်းတွင်အကောင့်အဆင့်ဆင့်ကိုတည်ဆောက်နိုင်စွမ်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်မိဘကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုယ်စားဒါမှမဟုတ်သူတို့အောက်ရှိလုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကိုယ်စားပြုပြီးသူတို့ရဲ့ဒေတာများကိုရယူနိုင်တယ်၊ အကောင့်မျိုးစုံကိုဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
ခွင့်ပြုချက်လုပ်ငန်းစဉ်များ - စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဥပဒေရေးရာ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ပြည်တွင်းပူးပေါင်းမှုအစီအစဉ်များကိုကိုင်တွယ်ရန်ခွင့်ပြုချက်အလွှာများရှိသည်။ ဥပမာဆိုရှယ်မီဒီယာအသစ်သည်အပေါင်းအသင်းမှဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ၊ မန်နေဂျာ၊ တရားဝင်၊ တရားဝင်အယ်ဒီတာသို့ထုတ်ဝေသူသို့ပြောင်းနိုင်သည်။ ဤလက်ကမ်းစာစောင်များကိုအီးမေးလ် (သို့) စာရင်းဇယားများမှတဆင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ထိန်းချုပ်မှုမှလွတ်မြောက်နိုင်သည်
လိုက်နာမှု၊ လုံခြုံရေး၊ မှတ်တမ်းများနှင့်အရန်ကူးခြင်းများ - မြင့်မားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိသောသို့မဟုတ်အများပိုင်ကုမ္ပဏီများတွင်လုံခြုံရေးသည်ထိပ်တန်းဖြစ်သည်။ သို့အတွက်ကြောင့်ပလက်ဖောင်းများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တတိယပါတီစာရင်းစစ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခံယူရန်လိုအပ်သည်။
တစ်ခုတည်းလက်မှတ်ထိုးဝင်ခြင်း (SSO) - ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့ဝင်ရောက်နိုင်သည့် application များ၏အတွင်းပိုင်းထိန်းချုပ်မှုကိုလိုချင်သည်။ Platform သို့ logging လုပ်ခြင်းကို IT ဌာနသို့မဟုတ်သူတို့၏ရုံးပလက်ဖောင်းမှပုံမှန်အားဖြင့်စီမံသည်။
Access Controls များ - တစ်စုံတစ် ဦး ကခွင့်ပြုထားသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုကျော်လွှားနိုင်ခြင်း (သို့) ၎င်းတို့ခွင့်ပြုချက်မရပဲလုပ်ဆောင်မှုများလုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုရန်သေချာစေရန်စီးပွားရေးဆော့ဝဲများအတွက်အခန်းကဏ္ and နှင့်ခွင့်ပြုချက်များသည်အရေးကြီးသည်။
ဝန်ဆောင်မှုများအဆင့်သဘောတူညီချက်များ (SLA) - တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရအချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်ရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပလက်ဖောင်းနှင့်မဆိုစာချုပ်ချုပ်ရန် SLA ကိုပုံမှန်အားဖြင့်သဘောတူရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်ပြုပြင်မှုများနှင့် ၀ င်ရောက်လုပ်ကိုင်မှုများကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ထားပြီး၎င်းတို့သည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုပါ။
multi-ဘာသာစကားများပံ့ပိုးမှု - ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးတွင်နေထိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ပလက်ဖောင်း၏သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်အတွင်းရှိဘာသာစကားမျိုးစုံကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်ဘာသာစကားမျိုးစုံဖြင့်ထုတ်ဝေရန်စွမ်းရည်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်လက်ယာဘက်သို့သွားသောဘာသာစကားများသည်များသောအားဖြင့်ပလက်ဖောင်းများအတိုင်းအတာတစ်ခုအနေဖြင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဖြေရှင်းရန်ပြန်လည်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ရန်ခက်ခဲသည်။
ဘက်စုံဇုန် - ဆက်သွယ်ရေးကိုထုတ်ဝေသည့်အခါကုမ္ပဏီငယ်များသည်အချိန်ဇုန်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုခြင်းကိုသင်အံ့အားသင့်မည်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်း၏အချိန်ဇုန်ကိုပလက်ဖောင်းသို့တပ်ဆင်ခြင်းအပြင်သင့်ပစ်မှတ်ထားဆက်သွယ်မှုကို ဦး တည်ရာ၏သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ဇုန်သို့အချိန်ဇယားဆွဲနိုင်ပါသလား။ ကုမ္ပဏီအတော်များများတွင်အချိန်ဇုန်များထည့်သွင်းမည့်အစားအချိန်ဇုံချိန်ညှိမှုများရှိသည်။
Integrated - Application Programming Interfaces များ (APIs) နှင့်အခြားစနစ်များနှင့်ထုတ်ကုန်များဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားခြင်းသည်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊
အာမခံ - ကျွန်ုပ်တို့သည်တရား ၀ င်သောကမ္ဘာတွင်နေထိုင်သောကြောင့်ပလက်ဖောင်းတွင်တရားစွဲဆိုမှုများအားလုံးကိုအာမခံရန်လုံလောက်သောအာမခံချက်ရှိခြင်းသည်စီးပွားရေးဆော့ဖ်ဝဲပလက်ဖောင်းများတွင်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပလက်ဖောင်း hacked ခဲ့ခြင်းနှင့်အဆုံးဖောက်သည်များအနေဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုပေါ်ထွက်လာ ... သင်၏ပံ့ပိုးပေးကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်တာဝန်ဖြစ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါကအထက်ဖော်ပြပါအရာအားလုံးသည်သင်၏လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းတွင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်အောက်ပါလက္ခဏာများရှိသည် -
လုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲမှု - စနစ်အတွင်းရှိသုံးစွဲသူအုပ်စုတစ်စုမှနောက်တစ်ခုသို့အစီအစဉ်များကိုစတင်ရန်စွမ်းရည်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီတွင် ၄ င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကန့်သတ်ထားသော၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အခန်းကဏ္ and များနှင့်ခွင့်ပြုချက်များရှိသည်။ ဥပမာများ -
သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုအွန်လိုင်းတွင်ဖော်ပြသည် (တံဆိပ်ကပ်ထားခြင်းမရှိဘဲဖြစ်စေ) အလားအလာရှိသောစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖြစ်ပါကတောင်းဆိုမှုကိုရောင်းအားသို့လွှဲပေးနိုင်ပါသလား။ အကယ်၍ သုံးစွဲသူ၏ပြissueနာဖြစ်လျှင်သုံးစွဲသူ၏အထောက်အပံ့ကို? ဒါကမီဒီယာတောင်းဆိုချက်ဖြစ်ရင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလား။
သင့်တွင်လူမှုရေးထုတ်ဝြေခင်းနှင့်သတ်မှတ်ထားသောနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်များပါဝင်သည့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအစီအစဉ်ရှိသည်။ သင်၏ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းသည်အကြောင်းအရာပါဝင်မှုအဖွဲ့မှ၊ သင်၏ဂရပ်ဖစ်သို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုအဖွဲ့၊ သင်၏ဥပဒေရေးရာသို့မဟုတ်မန်နေးဂျင်းအဖွဲ့သို့၊ အတည်ပြုခြင်းနှင့်စီစဉ်ခြင်းများမှတဆင့်ရွေ့လျားနေသည့်အလုပ်ကိုတန်းစီနေသလား။
စီစဉ်ခြင်းနှင့်ပြက္ခဒိန်များ - ကော်ပိုရိတ်နှင့် subaccount အဆင့်တွင်သင်သည်သင်၏လူမှုမီဒီယာပြက္ခဒိန်ကိုအလွယ်တကူစီစစ်။ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးအလုပ်များကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါသလား။
လူမှုနားထောင်ခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ဆန်းစစ်ခြင်း - ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် subaccount အဆင့်တွင်စိတ်ဓာတ်ဆန်းစစ်မှုနှင့်အတူလူများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လူမှုရေးနားထောင်ခြင်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုသင်အသုံးပြုနိုင်မည်လား။ တုန့်ပြန်ရန်သင့်လျော်သောအဖွဲ့ကိုသတိပေးရန်သင်အသနားခံသောလမ်းကြောင်းကိုချက်ချင်းပို့နိုင်ပါသလား။ သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်ကောင်းသောဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားရန်သေချာစေရန်အချိန်ကျော်စိတ်ဓါတ်များအပေါ်သတင်းပို့နိုင်သလား?
Integrated - သင်သည်လူမှုရေးမီဒီယာလိုင်းတစ်ခုချင်းစီမှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ သတင်းပို့ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေရန်အတွက်ဗဟိုပလက်ဖောင်းတစ်ခုအတွင်းနှင့်သင်ကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ် subaccount အဆင့်တွင်သင်စီမံခန့်ခွဲနေသည့်အကောင့်တစ်ခုတွင်လုပ်နိုင်ပါသလား။ တောင်းဆိုမှုများရှိပါကအချက်အလက်များကိုသင်၏ဖောက်သည်အထောက်အပံ့သို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏ဆက်ဆံရေးစနစ်သို့ပြန်လည်ဆွဲယူနိုင်ပါသလား။ အလားအလာများကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများနှင့်အရောင်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းများအကြားအစက်များကိုချိတ်ဆက်ရန်အတွက်စနစ်တစ်ခုသို့သင်အရောင်းအ ၀ ယ်စုံစမ်းမှုများကိုတွန်းအားပေးနိုင်ပါသလား။
ခရီးပေါင်းစည်းရေး - သင်သည်သင်၏အဆက်အသွယ်၏လူမှုမီဒီယာလုပ်ဆောင်မှုနှင့်အတူ omnichannel ဖောက်သည်ခရီးအစပျိုးခြင်းနှင့်အဖြစ်အပျက်များကိုပံ့ပိုးပေးသောအရာအဖြစ် enable လုပ်နိုင်ပါသလား။
စက်သင်ယူ - AI ကိုအသုံးချခြင်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောထိုးထွင်းသိမြင်မှု၊ အွန်လိုင်းစကားဝိုင်းများ၊ တိကျသောမက်ဆေ့ခ်ျများ (သော့ချက်စာလုံးများ၊ ပုံရိပ်များ) နှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊
အစီရင်ခံခြင်းနှင့်ဒိုင်ခွက်များ - လှုပ်ရှားမှုအားလုံးအတွက်၊ ခိုင်မာသည့်အစီရင်ခံစာများကိုအလွယ်တကူစီစစ်နိုင်သည်၊ အပိုင်းလိုက်ခွဲနိုင်သည်၊ ထို့နောက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများ၊ အချိန်ကာလများသို့မဟုတ်တိကျသောအချိန်ကာလများရှိလှုပ်ရှားမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
သင်၏လူမှုမီဒီယာကြိုးပမ်းမှုများကိုအလိုအလျောက်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်၊ စီစဉ်ရန်နှင့်ပြက္ခဒိန်ပြုလုပ်ရန်အတွက်ဤအင်္ဂါရပ်များသည်သင်၏ပုံမှန်ဆိုရှယ်မီဒီယာအင်္ဂါရပ်များအပြင်ဖြစ်သည်။
Salesforce Social Studio သည် Enterprise Social Media Management အတွက်လိုအပ်သောအင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
စီမံခန့်ခွဲမှု - အရောင်းဝန်ထမ်းများနှင့် Salesforce ထုတ်ကုန်များအားဖြတ်သန်းခြင်း။
Publish - အကောင့်မျိုးစုံနဲ့ချန်နယ်အမျိုးမျိုးမှာအချိန်ဇယားဆွဲပြီးထုတ်ဝြေခင်း။
Engage - စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများကိုအလယ်အလတ်နှင့်ပူးပေါင်းနိုင်ခြင်း၊ ထို့နောက်လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုဝန်ဆောင်မှုသို့ဖြစ်စေ၊
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - ပိုင်ဆိုင်သည့်အကောင့်များကိုစောင့်ကြည့်ပြီးနားထောင်ပါ။ သော့ချက်စာလုံးများနှင့်စိတ်ဓါတ်များအပေါ်လူမှုမီဒီယာကိုထိုးဖောက်ပါ။
Artificial Intelligence - အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအိုင်းစတိုင်းအားပုံရိပ်များအားအလိုအလျောက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင်အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရရှိစေနိုင်သည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းအားလုံးကိုသင်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအင်္ဂါရပ်များဖြင့်ဖန်တီးထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များအားမည်သည့်အချိန်တွင်အဆင့်ဆင့်ဆင့်သွားရန်အားပေးခဲ့သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ၎င်းတွင်ပလက်ဖောင်း၏လူကြိုက်များမှု၊ ယင်း၏ဆုများသို့မဟုတ်တတိယပါတီကုမ္ပဏီများမှအသိအမှတ်ပြုခြင်းများမပါ ၀ င်ပါ။
သင်၏ပန်းတိုင်များနှင့်စတင်ပါ - ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းဖြင့်သင်ဘာအောင်မြင်ရန်ကြိုးစားနေသနည်း။ နားလည်ပါ ပြဿနာ၎င်းသည်သင်၏အဖွဲ့အစည်းအပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့်ကြီးမားသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပေးမည့်တန်ဖိုး။ ၎င်းသည်အတွင်းပိုင်းအလိုအလျောက်ငွေစုခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ ယ်ယူသူအတွေ့အကြုံများကြောင့်အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီအချက်အလက်များကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ သိုလှောင်ထားခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
သင်၏အရင်းအမြစ်များကိုဆုံးဖြတ်ပါ - ပလက်ဖောင်းအသစ်သို့သင်ပြောင်းရွှေ့ရမည့်ပြည်တွင်းအရင်းအမြစ်များ (လူများ၊ ဘတ်ဂျက်နှင့်အချိန်ဇယား) တို့ကဘာလဲ။ ကလေးမွေးစားခြင်းယဉ်ကျေးမှုရှိပါသလား။ သင်ယူမှုနှင့်စနစ်သစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းစသောဖိစီးမှုများကိုခံနိုင်သောအသင်းရှိပါသလား။
လက်ရှိဖြစ်စဉ်များကိုဖေါ်ထုတ် - သင်၏လက်ရှိအဖွဲ့များကိုစီမံခန့်ခွဲမှုမှသင်၏ဖောက်သည်များရင်ဆိုင်နေရသော ၀ န်ထမ်းများအထိသင်လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသည့်လူမှုမီဒီယာလုပ်ငန်းစဉ်များကိုစစ်ဆေးပါ။ အဆိုပါစိတ်ပျက်အဖြစ်လက်ရှိပလက်ဖောင်းများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိရာဘယ်မှာနားလည်ပါ။ ဤအရာသည်၎င်းတို့အားထိခိုက်နစ်နာစေမည့်အစားအဖွဲ့အစည်း၏အားထုတ်မှုကိုတိုးတက်စေမည့်အဖြေတစ်ခုကိုသင်ရွေးချယ်လိမ့်မည်။ သင်၏နောက်လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်၎င်းကိုသီးခြားစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သင်၏ရောင်းချသူများကိုအကဲဖြတ်ပါ - သင်၏အရင်းအမြစ်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုရောင်းချသူတစ် ဦး စီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြီး၎င်းသည်သင်လိုအပ်သောလက်ရှိစွမ်းရည်အားလုံးနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်သေချာပါစေ။ အကောင်အထည်ဖော်ရန်သို့မဟုတ်ပြောင်းရွှေ့နေစဉ်အတွင်းပြသနာကိုကျော်လွှားရန်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်အချို့ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ သို့သော်ကလေးမွေးစားခြင်းအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုစီကိုမည်ကဲ့သို့အသေးစိတ်သင်မည်ကဲ့သို့စီမံမည်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ကြိုးစားပါ။
အခွင့်အလမ်းတိုင်းတာပါ - အကယ်၍ သင်သည်မတူညီသောပလက်ဖောင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှင်၎င်းတို့တွင်နည်းပညာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်သင်၏ပြန်လာမှုကိုတိုးတက်စေရန်အခွင့်အလမ်းပေးသောစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များရှိလိမ့်မည်။
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုရှယ်မီဒီယာအားထုတ်မှုအသစ်များကိုပလက်ဖောင်းအသစ်သို့ပြောင်းခြင်းသည်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများတွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်။ အမြော်အမြင်ရှိစွာရွေးချယ်ပါ အကြံပေး သို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးနောက်လာမည့်ရောင်းချသူအားသင်အကဲဖြတ်ရန်နှင့်ရွေးချယ်ရန်ကူညီနိုင်သည့်အကဲဖြတ်သူ။
Tags: စီးပွားရေးလူမှုမီဒီယာစီးပွားရေးလူမှုမီဒီယာအင်္ဂါရပ်များစီးပွားရေးဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းများလူမှုရေး CRMလူမှုမီဒီယာလူမှုမီဒီယာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုရှယ်မီဒီယာမော်ကွန်းတိုက်လူမှုမီဒီယာလိုက်နာမှုလူမှုမီဒီယာ crmလူမှုမီဒီယာဖောက်သည်ကြားဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုလူမှုမီဒီယာမိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းဆိုရှယ်မီဒီယာဖြည့်ညှင်းလူမှုမီဒီယာစောင့်ကြည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာထုတ်ဝေလူမှုမီဒီယာစည်းမျဉ်းလူမှုမီဒီယာအချိန်ဇယားဆွဲလူမှုမီဒီယာစုစည်းလူမှုမီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာ
Kamua: ဗီဒီယိုပြန်ဆိုခြင်းပုံစံများကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန် AI ကိုအသုံးပြုခြင်း
Emeric Ernoult သည်
မေလ 20, 2013 မှာ 10: 59 AM
ဟေး Doug၊ ကောင်းမွန်သော သုံးသပ်ချက်။ Shoutlet သည် အလွန်အစွမ်းထက်သော platform တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သေချာပါသည်။ မင်းနေကောင်းနေမယ်လို့ ငါမျှော်လင့်တယ်။